MyanPay’s Seller Protection Policy isasystem that always protects deceitful customers and not to cause the unnecessary loss like Chargeback and frauds.
MyanPay always guarantee with Seller Protection Policies to save time, money and not to occur the unwanted loss by checking the transactions and buyer/customer information.
The facts need to be compliant about Seller Protection Policy By Merchant/Seller/Recipient
The Merchant/Seller/Recipient who perform E-commerce Systems using MyanPay must proceed the following facts in order to get the protection with MyanPay’s Seller Protection Policy.
If you are merchant/seller from online shopping
You must clearly describe your item type, price, services for buyers on your websites or Facebook page.
You must keep the identity of product receipt if you send product to buyer with Direct Delivery.
You must keep the receipt if you send with Express Mail Delivery.
If you connect with buyers directly, you must keep the history of email message with buyers and emails sent from MyanPay without deleting.
You must keep all the records from the beginning of receiving buyer’s order to the end of delivering product to buyers.
If you are Recipient for Online service/ Online Business
You must make the request money by choosing “Request Money For Goods” or “Request Money For Services” via MyanPay’s Request Money.
To make that Request Money, you must clearly describe that which fee is for and which service is for to sender in Message Box.
If you connect with senders directly, you must keep the history of email message with sender and emails sent from MyanPay without deleting.
You must keep all the records from the beginning of connecting with sender to the end of finishing of services.
Solving frauds and getting protection by using Seller Protection Policy
MyanPay checks the buyer’s name, NRC, Email address and Phone Number correctly.
MyanPay get the confirmation to be sure the buyer’s payments.
MyanPay is always checking and monitoring to MyanPay users to be reliable and to be correct users.
You can get the protection with MyanPay’s Seller Protection Policy not to loss time and money for wrong buyer’s address, not accepting the order product from buyer, causing any complain from sender for service, not being reliable the buyers.
To get that protection, you must learn and be compliant the facts that need to be compliant about Seller Protection Policy by Merchant/Seller/Recipient.
If an unexpected complain occurs, MyanPay will solve the problem by using Seller Protection Policy quickly.
You can learn the details of MyanPay’s Buyer Protection Policy and Problem Solving process here.
MyanPay ၏ Seller Protection Policy ဆိုသည်မှာ Online မှတဆင့် ဈေးရောင်းသူ (Merchant/ Seller) များအတွက် မရိုးဖြောင့်သော ၀ယ်ယူသူ (Customer/Buyer) များ၊ မသမာသူများမှ လိမ်လည်မှု မရှိစေရန်နှင့် Chargeback ကဲ့သို့သော မလိုလားအပ်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် အမြဲစစ်ဆေးကာကွယ်ပေးထားသော စနစ် ဖြစ်ပါသည်။
MyanPay မှ Online မှတဆင့် ဈေးရောင်းသူ (Merchant/Seller) များအတွက် အချိန်နှင့် ငွေကို ချွှေတာနိုင်ရန်နှင့် မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် ငွေပေးချေမှု (Transaction) များနှင့် ၀ယ်ယူသူ (Customer/Buyer) များ၏ အချက်အလက်များအား အမြဲစစ်ဆေး အတည်ပြုပေးလျက်ရှိပြီး Seller Protection Policy များဖြင့်လည်း ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
Seller Protection Policy နှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူ၊ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ငွေလက်ခံသူ (Merchant/Seller/Recipient) ဘက်မှ လိုက်နာရမည့် အချက်များ
MyanPay အသုံးပြု၍ Online မှ ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံဆောင်ရွက်သော ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူ၊ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ငွေလက်ခံသူ (Merchant/Seller/Recipient) များသည် MyanPay ၏ Seller Protection Policy ဖြင့် ကာကွယ်မှုရရှိစေရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဆောင်ရွက်ထားရပါမည်။
သင်သည် Online Shopping မှတဆင့် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူ (Merchant/Seller) ဖြစ်ပါက –
Seller Protection Policy နှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူ၊ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ငွေလက်ခံသူ (Merchant/Seller/Recipient) ဘက်မှ လိုက်နာရမည့် အချက်များ။
၀ယ်ယူသူ (Buyer) ထံသို့ ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ရာတွင် တိုက်ရိုက်ပေးပို့ခြင်း (Direct Delivery) ဖြစ်ပါက ၀ယ်ယူသူမှ ကုန်ပစ္စည်း လက်ခံပြီးကြောင်းကို အထောက်အထား သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။
အမြန်ချောပို့ (Express Maill Delivery) ၀န်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ပါက ပေးပို့ထားကြောင်း လက်ခံ Receipt ကို သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။
၀ယ်ယူသူ (Buyer) နှင့် တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ရှိပါက Email အပြန်အလှန်ပေးပို့မှုများအား ဖျက်မပြစ်ဘဲ သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ MyanPay မှ ပေးပို့ထားသော Email များကိုလည်း ဖျက်မပြစ်ဘဲ သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။
၀ယ်ယူသူ (Buyer) ၏ ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာ ရရှိသည်မှစ၍ ၀ယ်ယူသူ (Buyer) ထံသို့ ကုန်ပစ္စည်း ပေးပို့ပြီးသည်အထိ အချက်အလက်များအားလုံးအား သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင်သည် Online Service / Online Business ကိစ္စရပ်များအတွက် ငွေလက်ခံ၍ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူ (Recipient) ဖြစ်ပါက –
MyanPay ၏ ငွေတောင်းခံခြင်း (Request Money) လုပ်ဆောင်ချက်မှတဆင့် “Request Money For Goods” (သို့မဟုတ်) “Request Money For Service” အား ရွေးချယ်၍ ငွေတောင်းခံခြင်းအား ပြုလုပ်ရပါမည်။
ထိုသို့ Request Money ပြုလုပ်ရာတွင် မည်သည့်အတွက်၊ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ငွေတောင်းခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို ငွေပေးပို့ရမည့်သူ (Sender) အား Message Box တွင် ရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်း အသိပေးရပါမည်။
ငွေပေးပို့ရမည့်သူ (Sender) နှင့် တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ရှိပါက Email အပြန်အလှန်ပေးပို့မှုများအား ဖျက်မပြစ်ဘဲ သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ MyanPay မှ ပေးပို့ထားသော Email များကိုလည်း ဖျက်မပြစ်ဘဲ သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။
ငွေပေးပို့ရမည့်သူ (Sender) နှင့် စတင်ဆက်သွယ်သည့်အချိန်မှစ၍ ၀န်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည်အထိ အချက်အလက်များအားလုံးအား သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Seller Protection Policy အား အသုံးပြု၍ ကာကွယ်မှု ရယူခြင်း၊ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း။
MyanPay မှ ၀ယ်ယူသူ (Buyer) ၏ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ Email လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် စသည့် အချက်အလက်များကို အမှန်ကန်ဆုံး ဖြစ်အောင် စစ်ဆေးထားပါသည်။
၀ယ်ယူသူ (Buyer) ၏ ငွေပေးချေမှု သေချာစေရန်အတွက်ကိုလည်း အတည်ပြုချက် ရယူထားပါသည်။
MyanPay စနစ် အသုံးပြုသောသူများကိုလည်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ မှန်ကန်သော သုံးစွဲသူများ ဖြစ်စေရန် အမြဲစီစစ် အတည်ပြုထားပါသည်။
အကယ်၍ လူကြီးအနေဖြင့် MyanPay အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုအား လက်ခံ၍ ကုန်ပစ္စည်းသွားပို့ရာတွင် ၀ယ်ယူသူ (Buyer) ၏ လိပ်စာမှန်ကန်မှု မရှိခြင်း၊ ၀ယ်ယူသူ (Buyer) မှ Order မှာပြီး ကုန်ပစ္စည်း သွားပို့ရာတွင် ပစ္စည်းလက်မခံခြင်း၊ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ငွေပေးပို့သူ (Sender) ဘက်မှ Complain တက်၍ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားခြင်း၊ ငွေပေးချေသူအား ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မရှိခြင်း စသည့် အဆင်မပြေမှုများအတွက် MyanPay ၏ Seller Protection Policy ဖြင့် အချိန်နှင့် ငွေကြေး နစ်နာမှု မရှိစေရန် ကာကွယ်မှု ရယူနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ ကာကွယ်မှု ရယူထားရန် အတွက် Seller Protection Policy တွင် ပါဝင်သော “ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူ၊ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ငွေလက်ခံသူ (Merchant/Seller/Recipient) ဘက်မှ လိုက်နာရမည့် အချက်များ” ကို ကြိုတင်လေ့လာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားရပါမည်။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ထားရာမှ မမျှော်လင့်သော အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက Seller Protection Policy အရ MyanPay မှ အမြန်ဆုံး တာဝန်ယူ ကူညီဖြေရှင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
MyanPay ၏ Buyer Protection Policy အသေးစိတ်နှင့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း Problem Solving လုပ်ဆောင်ပုံများကို သိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် အသေးစိတ် ဆက်လက်လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။